Jikwaa ohere draịvụ ike gị n'ụzọ dị iche na Pulvinus | Esi m mac
Jikwaa oghere draịvụ ike gị n'ụzọ dị iche na Pulvinus
Ka oge na-aga, draịvụ ike anyị malitere ijupụta na ụdị faịlụ dị iche iche, ma ha vidiyo, foto, akwụkwọ, ngwa ... ma ọ bụrụ na anyị nwere faịlụ ndị otu a) iji lelee ma oghere nwere ike ịdị mkpa maka ọrụ ọzọ. Ọ bụ ọrụ na-agwụ ike nke nwere ike ime ka anyị hapụ ebumnuche anyị na mbụ. Ọ dabara nke ọma na Mac App Store anyị nwere ike ịchọta ngwa na ekwe ka anyị na-elele na a ilekiri ohere nwere site ọ bụla nke faịlụ nke folda ahụ anyị ahọrọburu.
Pulvinus bụ otu n'ime ha, ngwa dị maka nbudata n'efu, ọbụlagodi n'oge mmemme nke isiokwu a. Usualgwọ ya bụ 1,99 euro. Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo dị n'elu, Pulvinus na-enye anyị ozi gbasara faịlụ ndị echekwara, nke agba dị na igbe dị mma. Mana Pulvinus anaghị enye anyị ohere ịlele ọdịnaya nke anyị chekwara na draịvụ ike anyị, kamakwa Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ihichapu ọdịnaya echekwara na Mac anyị.
Ngwa a nwere ụdị usoro eji emebe agba agba maka ụdị faịlụ ọ bụla, ma ọ bụrụ vidiyo, ọdịyo, akwụkwọ ma ọ bụ ngwa, iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịmata ha. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ihichapụ faịlụ ngwa, nke a na-anọchi anya dịka ọmụmaatụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, naanị anyị ga-ahọrọ ha wee pịa bọtịnụ hichapụ ma ọ bụ dọrọ ha ozugbo na biini egweri. Nyocha faịlụ Emere ya site na iji usoro di iche iche di iche iche di iche iche mee ihe iji merie isi nke Mac. Pulvinus nwere ihe karịrị 3.6 MB na. chọrọ macOS 10.12 iji rụọ ọrụ na mgbakwunye na ihe nhazi 64-bit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Jikwaa oghere draịvụ ike gị n'ụzọ dị iche na Pulvinus
Apple weputara Beta nke abuo nke macOS 10.12.5
Abụọ ekweisi Bluetooth na ọgbọ nke anọ Apple TV ... ọ bụghị maka ugbu a